Fahaizana vahiny any amin'ny firenena rehetra
Manaova raharaham-barotra amin'ny fanjakana hafa
Ny orinasam-panjakana dia fehezin'ny fanjakana amin'ny ankapobeny. Amin'izany, misy anarana telo; vahiny, vahiny ary vahiny. Ny orinasa iray ao an-toerana dia orinasa iray miandraikitra ny varotra ao amin'ny fanjakana. Raha maniry ny hitazona birao any amin'ny fanjakana hafa io orinasa io, dia tsy maintsy mametraka eo amin'ny fanjakana aloha izy ary heverina ho orinasa "vahiny". Ny fikambanana iray nokarakarain'ny firenena hafa dia heverina ho "vahiny". Ny Companies Incorporated dia hanampy amin'ny famolavolana ny antontan-kevitra ilaina ho anao mba hahafeno ny fepetra vahiny mba hahafahan'ny orinasa na orinasa miasa any amin'ny fanjakana hafa.
Mba hahafahan'ny vahiny manatanteraka ny raharaham-barotra misy anao any amin'ny fanjakana hafa, ny taratasy fanamarinana amin'ny toerana tsara dia tsy maintsy amidy ao amin'ny firenena misy anao ary alefa miaraka amin'ny lisitry ny kalitao vahiny ho any amin'ny firenena vahiny. Ity tolotra ity dia mitaky tahirin-kevitra sy fangatahana amin'ireo firenena voakasik'izany. Ny Companies Incorporated dia mampandeha mora izany ho anao, lazao anay fotsiny hoe aiza no misy anao, misy tsipiriany vitsivitsy momba ny orinasa misy anao ary inona no manambara fa tianao hofidiana.